सूर्य ४०० वर्ष यताकै चिसो: पृथ्वीको के होला हालत ? यसो भन्छन् वैज्ञानिक - Mitho Khabar
February 8, 2020 mithokhabarLeaveaComment on सूर्य ४०० वर्ष यताकै चिसो: पृथ्वीको के होला हालत ? यसो भन्छन् वैज्ञानिक
एजेन्सी। आउने ३० वर्ष पृथ्वीको तापक्रम धेरै कम हुने वैज्ञानिकहरुले दावी गरेका छन्। सूर्य एक प्राकृतिक शीतस्वापनबाट गुज्रने हुँदा पृथ्वी सहित अन्य ग्रहहरुको तापक्रम अध्याधिक कम हुने वैज्ञानिकहरुको दावी छ।
यस प्रकारको प्रक्रियालाई ‘ग्रयाण्ड सोलार मिनिमम’ भनेर उनी अर्थाउँछिन्। करिब ४०० वर्षमा यस्तो प्रक्रियाबाट सूर्य गुज्रने उनको दावी छ। द सनमा सम्प्रेषित लेखका अनुसार, सन् २०५३ पछि मात्र सौर्य क्रियाकलाप पूरानै अवस्थामा फर्किने छ।
युलेन्स स्कुलमा १ कक्षाकै मासिक शुल्क ४० हजार रुपैंयाँ